Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Ny Heroista fizahan-tany voalohany avy any Malezia dia ekena manana fifandraisana Alemanina
Oktobra 25, 2020
Ny tambajotran'izao tontolo izao dia nanamafy an'Andriamatoa Rudolf Herrmann avy any Pulau Pinang, Malezia ho mahery fo indrindra amin'ny fizahantany.
Andriamatoa Herrmann dia miditra amin'ny Efitrano iraisam-pirenena ho an'ny mahery fo fizahantany miaraka amin'ny mpikambana 18 amin'ny firenena 14. Andriamatoa Herrmann no olona voalohany nahazo izany fankasitrahana izany avy any Malezia.
Hoy izy: "Voninahitra voatendry ho an'ny loka Hero Hero ny mpiara-mianatra amiko mpiara-miasa amin'ireo mpandraharaha maniry fatratra. Ny tenako, fiaviana alemanina dia monina any Malezia aho.
Mpahay toekarena mpandraharaha ara-pizahantany nahazo fankatoavana tamin'ny alàlan'ny asa aman-draharaha, izaho koa dia mpandrindra trano fandraisam-bahiny sy mpampiofana mandray vahiny ary mpikambana ao amin'ny komity naoty kintana hotely.
Noterena hifindra asa aho noho ny Covid-19 indroa, dia nanao fanadihadiana momba ny Fandraharahana, miaraka amina fanatrehana manerantany. Vetivety dia nanao hetsika fianarana sy fizarana fanampiny tamin'ny media serasera nomerika ny vondrona misy anay.
Fivoriana fanaterana isaky ny tapa-bolana no tanterahina ary tato ho ato dia nanolotra ny fiantraikany sy ny fanamby noho ny areti-mandringana ankehitriny amin'ny fizahan-tany sy ny varotra fandraisam-bahiny aho. Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampanohanay&oldid=XNUMX ''
Notendren'i Anjula Chakravarthy
Rudolf dia olona tena marina sy tsara fanahy. Manana traikefa be dia be amin'ny sehatry ny fizahan-tany izy ary ny lafiny tsara indrindra momba azy dia ny fahazotoana mizara ny fahalalany amin'ny tanora hatrany… Mila mpanoro lalana toa azy izay manentana ny hafa sy mizara ny fahalalany ary manabe ny olona dia niasa tamin'ny fizahan-tany ivelany avy any Alemana ka hatrany Azia ary nanamboatra fonosana. Niasa tany Medan / Sumatra, Bali, Jakarta / Java izy. Ary nanao dia nitety an'i Java, Sumatra, Lombok, ary Sulawesi any Indonezia. Izany no nahatonga azy ho mendrika an'ity loka tsara indrindra ity ho an'ny namako mpanolo-tsaina malalako
Notendren'i Avantika Patil, Ishtara Healthcare & Wellness LLP
Rudolf dia tao amin'ny indostrian'ny fizahantany nandritra ny fotoana kelikely. Tsy vitan'ny hoe be zotom-po sy miasa mafy izy, fa mahay mangoraka sy mifantoka amin'ny mpanjifa ihany koa. Mino aho fa mifanentana tsara amin'ity mari-pankasitrahana ity satria nampiroborobo fatratra ny dia azo antoka nandritra ireo fotoan-tsarotra. Miezaka ny mandanjalanja amin'ny indostria izy. Ny olona toa azy dia mahatonga ny mpanjifa hahatsapa ho voaro sy tsy hatoky tena.
Notendren'i Desire Obah milaza
Rudolf dia manome lanja lehibe ny famerenana amin'ny laoniny ny fizahantany azo antoka. Manana zava-bita maro koa izy ao anatin'izany: - Ny maha Mpitantana Jeneraly voalohany any Malezia izay nitana ny diplaoma avo indrindra azon'ny AHLA / USA.
Laharana voalohany amin'ny booking.com any Bali afaka 3 volana misesy. - Iray amin'ireo voalohany nampihatra rafi-trano fandraisam-bahiny miorina amin'ny tranokala.
OTA, mpitantana fantsona & fitantanana fitantanana motera famandrihana.
Fitsidihana fonosana ambongadiny voalohany mankany amin'ny toerana maro samihafa.
Notendren'i Valentina Anthonio
Mampiseho ny mampiavaka ny tena mpitarika sy manavao izy amin'ny fifanakalozana ataony isan'andro. Fanentanam-panahy ho an'ny maro izay maniry hiditra amin'ny indostrian'ny hotely na mahita olona hianarana.
Notendren'i Juliana GraceGeorge
Andriamatoa Rudolf Herrmann dia nanaporofo fa mendrika an'io fanendrena io tamin'ny fiasana tsy an-kijanona amin'ny fanomanana ambangovangony momba ny fizahan-tany mandritra ity valanaretina ity. Izy koa dia niasa tamina toerana fizahan-tany isan-karazany izay inoako fa nanome azy ny fahalalana ny fizahan-tany bebe kokoa sy ny fomba fiasan'izy io. Hw dia mpandraharaha mahatalanjona ihany koa izay tsy ny ivon'ny fifantohany amin'ny fananganana fizahan-tany azo antoka ihany koa fa ny mpitarika mahafinaritra. Soa ihany aho fa tao amin'ny vondrona iray izay nanolorany fampisehoana momba ny fahazoana sehatra fizahan-tany azo antoka sy azo antoka kokoa nandritra ireo fotoan-tsarotra ireo ary nianatra zavatra betsaka aho ary izany no nanosika ahy hanao zavatra momba izany koa.
Manomeza anarana hafa ho an'ny Hall International an'ny Maherifo momba ny fizahantany:
Ireo manana loka dia nampiseho fahaiza-mitarika, fanavaozana ary hetsika miavaka. Mandeha amin'ny dingana fanampiny izy ireo. Maimaimpoana ny fanolorana anarana sy ny loka.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Tour Heroes Award sy ny fomba fanendrena anao hitsidika www.heroes.travel